Dhaqaalaha Ghostwriter I Waxaan kaa caawinaynaa inaad ka gudubto shahaadada Papernerds
, 21: 41
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibradda lagama maarmaanka u ah dhaqaalaha
Haddii sahayda iyo baahida la kulmo, taas oo badeecadaha ama adeegyada lagu beddelayo qiimo ama iib la doonayo in la gaaro, qofku wuxuu ka hadlayaa suuq xagga dareenka dhaqaalaha ah. Dhaqaalaha wuxuu muujinayaa meertada dhaqaalaha wuxuuna sharxayaa xiriirka ka dhexeeya shirkadaha, macaamiisha iyo shaqaalaha suuqyada dhaqaalaha. Ujeedadaas awgeed, moodello loogu yeero ayaa la soo saaray oo sharaxaya dhaqanka ka-qaybgalayaasha suuqa ee suuqyada. Waxay sharraxaysaa horumarka qiimaha, mushaharka iyo tirada wax soo saarka ama hannaanka sarrifka iyada oo loo marayo lacag iyo alaabooyinka socda. Baahiyaha dadka waxaa lagu daboolaa badeecado bilaash ah oo yar. Alaabada bilaashka ah ayaa loo heli karaa qof walba oo bilaash ah. Badeecadaha yar yar way xadidan yihiin, waxay leeyihiin qiimo, badanaa waxaa soo saara waxqabad dhaqaale sidaas darteedna waa diiradda dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Si loo gaaro waxa loogu yeero guusha ama ujeedooyinka dhaqaale, shirkaduhu waxay u dhaqmaan si waafaqsan mabda'a dhaqaale. Mabda 'dhaqaale ahaan waxaa loo maleynayaa in bini'aadamku ula kac ula dhaqmo si loo kordhiyo faa'iidada. Waxa lagu kala soocayaa mabda'a ugu yar iyo kan ugu sarreeya. Mabda'a ugu sarreeya, natiijada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah waa in lagu gaaraa ilaha jira. Mabda'a ugu yar, dhanka kale, wuxuu sheegayaa in shahaado gaar ah oo guul ah lagu gaaro habka ugu yar ee suurtogalka ah.
Dhaqaalaha, ereyada sida:
ka Baahiyaha iyo baahiyaha (Maslow darajadiisa baahiyaha),
ka Dhaqaalaha yar-yar iyo dhaqaalaha,
ka Waxyaabaha wax soo saarka,
ka Wareegga dhaqaalaha,
ka noocyada kala duwan ee suuqa (Monopoly, oligopoly iyo polypol),
ka Suuqyada Iibsadayaasha iyo Iibiyeyaasha iyo
ka Qiimaha isku dheelitirka ayaa la sharaxay.
Qeyb kale oo muhiim ah waa iskudhafka shirkadaha kaladuwan (tusaale ahaan koox-kooxeedyo, kooxo, amaano) iyo xisaabaadka qaranka. Waaxdu waxay dabooleysaa isdhaxgalka siyaasada lacagta iyo canshuuraha, siyaasada suuqa shaqada iyo howlaha iyo mabaadiida suuqyada. Nuxurka sharciga ah waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, sharciga canshuuraha iyo tartanka, sharciga ganacsiga gaarka loo leeyahay, sharciga caalamiga ah iyo qandaraasyada (tusaale, EU, heshiiska ganacsiga xorta ah, tartanka iyo sharciga ganacsiga, iwm.). Shahaadada dhaqaalaha waxaad ku falanqeyn kartaa kuna qiimeyn kartaa isku dhacyada dhaqaale heer qaran iyo heer caalami. Inta lagu guda jiro barashadaada dhaqaalaha waxaad ogaan doontaa inaad haysato dad aad u tiro badan Guri-/Waraaqaha siminaarka waana inay sameeyaan qiimeyn tirakoob inta ay waxbarashadooda socdaan. Sida xagga dhaqaalaha ama maamulka ganacsiga, waxaan sidoo kale si ballaadhan u taaganahay aaggaaga oo ay joogaan qoraayo badan. Adiga ayaa gacanta kuugu hayna su'aalaha dhaqaalaha. Waxaan ka helnaa weydiimo badan ardayda koorsadan. Sidaa darteed, waxaan sidoo kale haysannaa qoraayo tiro badan oo kula kulmi kara rabitaankaaga mowduucyo badan. Qorayaasheennu waxay ku takhasusaan aagagga soo socda:
Maamulka guud ee ganacsiga
Dhaqaalaha yar yar
Maaddooyin gaar ah (sida dhaqaalaha shaqada, dhaqaalaha warshadaha, aragtida ganacsiga shisheeyaha, dhaqaalaha qoyska, dhaqaalaha caafimaadka, iwm.)
Siyaasadda Maaliyadda iyo Siyaasadda Lacagta
Guusha gaarka ah ee ay qorayaashu ka gaadheen cilmiga dhaqaalaha waxay u dhexeeyaan tacliimeed shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qormooyinka PhD, Theses, iwm oo ku saabsan cilmi baarista guud ee sayniska. Waxaan kugu taageeri karnaa qoraallada sayniska.
Mawduucaagu waa xooggeenna. Qorayaasheennu waxay ku damaanad qaadayaan tayada. Waxaad haysataa dhowr sano oo khibrad ah qorista waraaqaha tacliinta. Si loo soo gudbiyo shaqada sayniska, shaqo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa. Tani waxay ku siin doontaa darajo wanaagsan. Hubinta khayaanada ayaa dabcan sidoo kale daboolay adeeggayaga! Ugu dambeyntiina, markaad na shaqaaleyso, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax walba oo ka sarreeya qiimaha caddaaladda iyo tayada wanaagsan! Maadaama aad tahay aqoon yahan dhaqaale yahan ah, waxaad si fiican uga warqabtaa hal mabda 'inta aad ku guda jirto waxbarashadaada:
“Had iyo jeer ku guuleysta guusha ugu badan adoo adeegsanaya ilaha jira - sidee taas u noqotaa? Iyadoo kooxdeena ay tahay qoraagaaga xirfadeed! "
Shaqada tacliimeed, waa inaad u isticmaashaa wakaaladeena cirfiidka qoraaga. Qoritaanka qoraalkaaga ayaa kuu badbaadin doona waqti iyo shaqo.
Mid toos u weydii codsi aan qasab ahaynsi aad naftaada ugu qanciso waxqabadkeena. Na sii faahfaahintaada si aan kuu caawinno. Waad badbaadin doontaa waqti iyo xanaaq aad nala qabtid! Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Waan caawin karnaa ardayda.
Koorsadu waa, sida maamulka ganacsiga, maado si gaar ah caan u ah. Koorsadani waxay kaga duwan tahay maamulka ganacsiga inay ilaaliso mabaadi'da guud ee dhaqaalaha. Ardayda dhaqaalaha waxay sidoo kale baaraan mabaadi'da guud ee dhaqaalaha suuqa iyo aragtiyaha. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah waxaa jira iskudhaf ballaaran oo maadooyinka maamulka ganacsiga, gaar ahaan qeybta koowaad ee shahaadada. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan aagagga suuqgeynta, xisaabinta ama qaababka guud ee xisaabta iyo tirakoobka. Waxaan kaa caawin karnaa aqoontayada dhaqaale. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Dhaqaalaha nolosha xirfadeed
Markaad ka qalinjabiso dhaqaalaha, shaqo-bixiyahaaga mustaqbalka wuxuu filayaa, waxyaabo kale, xirfadaha farsamada iyo habka. Habka ugu fudud ee shirkadaha ay ku tijaabiyaan aqoontooda ayaa ah natiijooyinka aad ka gaadhay kuwaaga shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraalka ama shaqada kale ee mashruuca. Guud ahaan, xaqiiqadani waxay muujineysaa sida ay muhiimka ugu tahay qalin-jabinta maalmahan qalinjabintu. Guusha ugu kalsoon ee tan hubaal waa taageerada qoraa aamin ah oo karti leh. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada.
Aagga dhaqaalaha ee shirkadaha ganacsiga
Rajada shaqo ee ardayda qalin jabisay aad ayey u wanaagsan tahay. Badanaa ardayda qalin jabisa ee shahaadadan waxay ka dhigtaa jagooyinka maamulka sare ee shirkadaha Jarmalka hogaaminaya. Kuwaaga hada noo soo dir baaritaan ama si fudud noo soo wac si aan wax badan uga ogaano adeegyadayada! Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona.
Hubinta tayada ee dhanka dhaqaalaha